Si kalsoonidii Ummaddu usoo laabato, Caasimaduna ay u noqoto Xarunta Federaalka Somalia. | Somali - Diaspora
Si kalsoonidii Ummaddu usoo laabato, Caasimaduna ay u noqoto Xarunta Federaalka Somalia.
Waxaan in Badan is weeydiiyey sababta keentay in Xilka Mas’uulka sare ee Caassimadda Federaalka Soomaaliya. Uu unoqday mid aanan hadal ka taagneeyn.
Xilalka kale ee sar sare ee Dalka, sida Madaxweynaha, Wasiirka koowaad (PM) ama Guddoomiyaha Golaha shacabka oo intuba ah xil sare oo ka dhaxeeya Ummadda ayaa lagu saleeyaa Nidaamka 4.5
Mar hadii Qabiiladdu ay kala qeeybsadeen xilalka Madaxweynaha, Rá,iisulwasaaraha & Gudoomiyaha Baarlamaanka, maxaa sababay in Beelaha Dhiman sida Dir iyo Kuwa ku midoobay Barka in ay qaataan Xilka Caasimadda.
Caasimadda Dowladda Federaalka Somalia oo ilaa iyo hadda ah Muqdisho ayaa u bahan in Taladeeda loo gacan galiyo Ummadda Somaliyeed oo haatan muujineysa Wax u eg isu soo dhawaad iyo Wax wada qabsi.
Caasimaddu ma noqon karto ama noqon doonto Magaalo ummadda Somaliyeed ay wada leedahay, inta xilka & Mas’uuliyaddaba aan habqeybsiga hadda xilalka sar sare lagu kala qaatay, aanan lagu magacaabin ama loogu tartamin.
Waxaad moodaa in su’aashan ay tahay mid guuxeedu uu ka socdo dhammaan goobaha somalidu ay ku kulmaan, sida goobaha lagu shaaho, Masaajidada iyo meelaha la midka ah. Sababtuna waxaa ay tahay iyada oo Soomaalidu ay isha ku heyso ama ka warsugeeyso hanaanka Awood qeybsiga Dalka.
Si kastaa oo xukuumad & gole shacab loo dhisaba, hadaan dareenka shacabka la qadarin horumarku wuxuu noqonayaa one man’s dream, mana noqondoono mid ka tarjumaya All inclusive policy soomaalidu raadineeyso beryahan dambe.
Wax yaabaha yaabka leh ee Muqdisho ka jira ayaa ah, in ayan jirin isku day mideeysan oo dadka deegaanku kaga arinsanayaan Aayaha iyo tilmaamta ay Muqdisho yeelan doonto, mana jirto qorshe ay Dowladdu arintaa ugu tala gashay, marka laga reebo qodob dastuurka ku jira oo isna dib loo dhigay.
Waxaan Kula talin lahaa Madaxweynaha iyo dhammaan madaxda kale ee dalka in ayan isku mashquulin Jubaland iwm, balse ay fiirshaan dhameystirka hanaanka awood qeybsiga dalka, tartan doorasho oo u dhaxeeya beelaha dhimanna ay u waban qaabiyaan sidii uu uga dhici lahaa xarunta Golaha Shacabka Somaliyeed, si kalsoonidii ummaddu usoo laabato, Caasimaduna ay u noqoto Xarunta Federaalka Somalia.
My ideas usually come not at my desk writing but in the midst of living.Prof.Ibrahim
Daawo Sawir Cajiib ah oo laga sameeyay Tirada Golaha Wasiirada ay isku heestaan R/Wasaaraha iyo Madaxweynaha Magaca “Soomaaliya” waxa uu u socdaa in uu galo Qaamuuska Dunida